DEG DEG:- Ciidan ka tirsan dowladda Soomaaliya oo si xoog ah ku galay halka uu ka socday shirka Hiiraan State – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Ciidan ka tirsan dowladda Soomaaliya oo si xoog ah ku galay halka uu ka socday shirka Hiiraan State
Wararka haatan naga soo gaaraya magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in ciidamo katirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay goordhow gudaha u galeen halka uu ka socday shir lagu dhisaayay maamul u gaar ah gobolkaas oo la magac baxay Hiiraan State.
Ciidamada ka tirsan kuwa militeriga Soomaaliya ayaa lasoo sheegayaa inay xoog ku galeen Baar Xasan Dhiif oo ku yaala bariga magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaas oo la sheegay inuu ka socday shir ay soo agaasimeen odayaal ka biya diiday inay tagaan shirka haatan ka socda magaalada Jowhar ee maamulka loogu sameeynayo gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Saraakiil ka tirsan ciidanka xooga dalka Soomaaliya oo aynu qadka teleefanka kula xiriirnay ayaa waxay inoo sheegeen sababta ay ciidankooda arrinkaasi u sameeyeen ay tahay amar kasoo baxay taliska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed.
Dhinaca kale, ilo lagu kalsoonaan karo oo aynu heleyno ayaa sheegaya in haatan uu jiro khilaaf aad u xoogan oo soo kala dhex galay saraakiisha ciidanka xooga dalka iyo kuwa maamulka gobolka Hiiraan, kaas oo ku aadan ishor-taaga maanta lagu sameeyay shirkii ka socday magaalada B/weyne.
Sidoo kale, odayaasha ku shirsan magaalada B/weyne ayaa inoo sheegay in ciidamo katirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay tageen halka shirka uu ka socday ayna weydiiyeen odayaasha cidda amaankooda suggeysay.
Si kastaba ha ahaatee, arrintaan ayaa kusoo beegmaysa xilli maalintii shalay magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan lagu soo gaba-gabeeyay kulan lagu soo bandhigay dastuurka uu yeelanayo maamulka Hiiraan State oo dhawaan ay duubabka-dhaqanka ee halkaasi dhismihiisa ay magaaladaasi uga dhawaaqeen.